5 Meelaha ugu Kalluumaysiga In Europe Si raaxaysta | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Meelaha ugu Kalluumaysiga In Europe Si raaxaysta
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 16/01/2021)
Ma jiraan wax iska sida kalluumaysiga markii ugu horeysay ee meel cusub. Waayo, wax kasta oo angler, in ka go'neyd ama ka buuxa waayo-aragnimo, kalluumaysiga waa hawl qaali ah taas oo ka caawisa nasato. Maxay noqon karaan waxa ka fiican iyaga u badan isku dalxiiska iyo dheeldheel ay jecel yihiin?
Nasiib wanaag, kuwa ku raaxaysan kalluumaysiga, waxaa jira meelo waa weyn oo Yurub feature in noocyo kala duwan oo kalluun. Haddii aad tahay qorsheyneysa in aad fasax soo socda oo dhan ee ku saabsan kalluumaysiga, waxaan kaa caawin kara in aad go'aan meel ay aadaan. Aynu eegno at liiska of our 5 Meelaha kalluumaysiga ugu fiican Yurub inay ku raaxaystaan:
1. Meelaha Kalluumaysiga In Sweden
Haddii aad rabto in aad loo kalluumaysto ee Sweden, waxaad u baahan tahay eegi badan sii badan Stockholm meelaha kalluumaysiga weyn. Tusaale ahaan, Stromgatan waa xaq dhexe ee magaalada, iyo waxa ay leedahay a view weyn. Waxaad ku kor dhismaha baarlamaanka Swedish eegi kartaa oo Town The Old halka kalluumaysiga. Meel kale oo magaalooyinka waa sjöstad Hammarby ku dul Hammarby baddii, xaafad caanka ah ee Stockholm. Waxay leedahay badan oo meelaha kalluumaysiga weyn iyo si fudud waa magaaladii ka soo heli karo.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad waayo-aragnimo kalluumaysiga dabeecadda dheeraad ah classic, ma waxaad u baahan doontaa in aad meel fog ka kaxeeyo Stockholm. Ringsjon Lake waxay bixisaa qaar ka mid ah meelaha kalluumaysiga qurux badan halkaas oo aad ka qaadi kartaa whitefish madaxeedana kalluun. Drevviken waa gudubno kale xasilloon u dhow Stockholm, la mid ah Ringsjön. A weyn iyo waara meel kalluumeysi, Drevviken Lake ma aad niyad jabin doonaa.
Waxaad sidoo kale madax laga yaabaa in jasiiradaha Stockholm iyo jasiiradda of Galo, taas oo ah Janno go'doon run. Waxaad u degno karo iyo kalluunka waxaa si aad qalbigayga ka content, riyaaqayaa dabiiciga ah jasiiradaha ee.
2. Meelaha Kalluumaysiga In France
France waa dal aad u qurux badan waxqabadka kaliya oo ku saabsan wax kasta oo, sidaas darteed waa ma kalluumaysiga yaab in France sidoo kale waa weyn. Mid ka mid ah goobaha ugu caansan kalluumaysiga waa Lac du Bourget, gudubno qotada dheer iyo ugu weyn France ee. Waa meel cajiib ah sababtoo ah waxa ku yaala in ka badan 30 noocyada kalluunka. Iyaga ka mid ah, kalluun, Zander, Pike, iyo kaluun taagan. gudubno, sida runta ah waa jawharad ee gobolka Rhone-Alps.
Markaas waxaa jira Bassin d'Arcachon ku koonfur-galbeed xeebta ee France - kuwa ku raaxaysan kalluumaysiga iyo harooyinka. Qorrax ka Beautiful, biyo cad-cad, iyo bass badda waa uun qaar ka mid ah waxyaabaha aad ka filan karto Arcachon.
Kaluumaysato jacaylka dibadda Lake Der-Chantecoq, xaq qalbiga gobolka Champagne ah, xad u dhow Paris. Waa wax weyn a meel loogu talagalay bilowga ah, inkastoo pros jir inta u gudubno, sababtoo ah kalluun Rafaa. meelo kale oo caan ah Faransiis waxaa ka mid ah La Rance River iyo Alder. Labaduba waa caan ah ay yihiin dalal weyn oo ay ku qaadato qoyska safar kalluumaysi.
3. Meelaha Kalluumaysiga In Italy
Marka in Italy, aad iyo sidoo ekaan karaan qaar ka mid ah meelaha kalluumaysiga ugu fiican Yurub. gobolka ee Le Marche waxay bixisaa qaar ka mid ah kalluumaysiga weyn, gaar ahaan Cingoli, Pioraco, iyo Sefro. Waxay tahay qaar ka mid ah harooyinka Talyaani ugu quruxda badan waayo, kalluumaysiga, kalluun ku jirto, Pike, iyo kalluun, ka mid ah noocyada kale. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaado harooyinka, sidoo kale waxaa jira Lake Como ilaa waqooyiga, ay Pike oo kaluun.
Yaanan ilaawin webiga ugu weyn ee dalka Talyaaniga, Po ah. Waxaa ku yaala catfish Rafaa oo carps weyn in sasabaya lahaa angler kasta. In Tuscany, webiyaasha waa meelaha ugu caansan kalluumaysiga. Lima oo shaandho jira meelo weyn loo kalluumaysto, waayo, kalluun iyo Grayling.
Waayo, kuwa kaluumaysato ka jecel kalluumaysiga on biyaha furan, waxaa jira laba meelaha kalluumaysiga weyn ee Italy. Egadi Islands The ee Sicily iyo xeebaha ee Sardinia labadaba aad stun doono la Quruxdooda iyo tayada kalluumaysiga ay bixiyaan. Raadi tuna buluug-fin iyo swordfish Sicilian Mediterranean, iyo kuul-Jack, snapper, iyo Garrick Badda Tyrrhenian ah.
4. Meelaha Kalluumaysiga In UK The
The Boqortooyada Ingiriiska waa meel cajiib ah, bixiya qaar ka mid ah meelaha kalluumaysiga weyn quruxda unspoiled duurjoogta gasiiradaha. Haddii aad rabto in aad heshaan la yaab leh, UK waxaa laga yaabaa in meesha kugu habboon. Laakiin taas oo meel waa in aad soo qaado?
Mid ka mid ah meelaha ugu caansan Dartmoor, Devon. Iyada oo magaca evocative caynkaas ah, ma aad dafiri karto in la qiyaaso-aragnimo ah ee kalluumaysiga kalluun gaajaysan in durdurrada madow. Tyne ee Northumberland webiga uu leeyahay midab ah oo bixiya aad a faa'iido oo kala duwan ka dhanka nool kalluun badda waxaa ku. Taas ayaa ka dhigaysa kaamil webiga this kalluumaysi la badallo iyo kalluun badda qabsado ugu weyn.
River Clettwr u dhow soohdinta reer England iyo Wales waxa uu noqon doonaa meesha ugu soo jiidashada badan, waayo, adventurers. Eeg dheeraad ah lahayn, haddii aad rabto in aad si adag u shaqeeyaan si aad u heshaan in biyaha xunxunna. Xaaladda xoogaa waa dheeraad ah oo la heli karo at Strangford raaxaan, County Down. Waa Lok badda weyn UK ​​ee moodid la mackerel, Pollock, iyo haddock, kuwo kale.
Assynt laga yaabaa in meesha ugu baqeen-dhiirigalin ah oo dhan - cunugtii oo hoos weyn buuraha, iyadoo labada fursadaha kalluumaysiga iyo harooyinka iyo biyaha saafiga ah. Fionn Loch waa meel fiican oo loo kalluumaysto, waayo, kalluun hooyo brown.
5. Meelaha Kalluumaysiga In Germany
Germany Dhab ahaan u qalmo meeshiisii ​​liiska meelaha kalluumaysiga ugu fiican Yurub. Iyada oo aad u badan Wabiyaal weyn iyo harooyinka, waxa uu noqon lahaa yaab leh haddii ay ma aysan samayn liiska. Qaar ka mid ah goobaha ugu caansan for kalluumaysta Germany u leeyihiin in ay ka mid ah Danube degaanka. In ka 8 Kiiloomitir meesha dheer Bavaria Danube, waxaad qaadi kartaa kala duwanaanshaha weyn ee kalluunka.
Waayo, kalluumaysiga webiga more, ka Rhine iyo Elbe ah, jecel yihiin gaar ahaan Baden-Wurttemberg iyo Saxony-Anhalt, siday u kala horreeyaan, waayo-aragnimo waa mid cajiib ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad doorbidayso kalluumaysiga baddii, mar walba waxaa jira gudubno Chiemsee iyo Lake Starnberg. Labada arrin u mool dheer yihiin, la fara badan Pike, kalluun, iyo bream.
Maxaa yeelay, dhammaan kaluumaysato xajiin ah in ay u safraan, waxaa jira siyaabo in la isu geeyo labada jacayl u faro badan. Europe waxay bixisaa badan oo meelo si ay u qabsado weyn iyo raaxaysan dabeecadda iyo magaalooyinkii nool si isku mid ah.
Haddii aad rabto in aad la kulanto qaar ka mid ah kalluumaysiga weyn, badan waxaa jira ee si fudud loo heli 5 meelaha kalluumaysiga ugu fiican Yurub inay ku raaxaystaan. Haddii aad diyaar u ah inay ku dhacay biyihii ku tahay, jartaan tikidhka tareenka aad hadda oo aadan dib u eegto!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Meelaha Kalluumaysiga ugu fiican Yurub Si aad u raaxayso” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-best-fishing-places-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#kalluumaysiga #traveleurope europetravel trainjourney travelgermany traveltips